संक्रमित छोरालाई हेरीरहेको तस्बिरले संसारलाई नै बनायो भावुक ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /रोचक/संक्रमित छोरालाई हेरीरहेको तस्बिरले संसारलाई नै बनायो भावुक !
संक्रमित छोरालाई हेरीरहेको तस्बिरले संसारलाई नै बनायो भावुक !
हामि सबैलाई थाहा नै छ संसारको सबैभन्दा ठुलो सम्बन्ध आमासँग नै हुन्छ । आमाको माया कत्तिसम्म अपार हुन्छ भन्ने हरेक सन्तानलाई थाहा नै छ ।हामिले आमालाई भगवानको रुपमा लिने गर्छै । पछिल्लो समय एक तस्बिरले धेरैलाई भावुक बनाएको छ ।
तस्बिरमा अस्पतालमा भर्ती भएका को’भिडका ग’म्भीर बि’रामीको उपचारका लागि भर्ना छन र आमाले झ्या’लबाट हेरीरहेकि छिन्। राजधानी दिल्लीका अन्य अस्पतालहरुमा पनि अ’क्सिजनको कमी छ । एक दिन पहिले सर गंगाराम अस्पतालमा २५ जना बि’रामीले अक्सिजनको कमीकै कारण आफ्नो ज्यान गु’माएका थिए ।
दिल्लीमा कोरोना भाइरसको प्र’भाव उच्च छ । यहाँ शुक्रबार २४ हजारभन्दा धेरैमा संक्रमण देखिएको थियो ।भारतको राजधानी दिल्लीमा कोरोना भाइरसको बढ्दो ख’तराबीच अक्सिजनको सं’कट पनि चरम अवस्थामा छ । अस्पतालमा भर्ती भएका को’भिडका ग’म्भीर बि’रामीको उपचारका लागि अक्सिजन जरुरी हुन्छ ।
यसको अ’भाव अहिले प्रा’णघा’तक सा’बित भइरहेको छ ।शनिबार दिल्लीको ज’यपुर गोल्डेन अस्पतालमा अक्सिजनको कमीका कारण २५ बि’रामीको मृ’त्यु भयो । अस्पतालका मे’डिकल डाइरेक्टर डाक्टर बलुजाका अनुसार अस्पतालमा शुक्रबार साँझ साँढे पाँच बजेसम्म आ’उनुपर्ने अक्सिजन मध्यराति १२ बजेमात्रै पुग्यो ।
आँगन खन्दा भेटियो देख्दै सातो जाने बस्तु, त्यो भित्र खोलेर हेर्दा झण्डै ढलेनन्